Apple dia nanangana iPad 9,7 vaovao vaovao ary mifanaraka amin'ny Apple Pencil | Avy amin'ny mac aho
Ny hetsika Apple mifandraika amin'ny fanabeazana dia efa natomboka ary nila fotoana fohy izy ireo mba hanambarana izay efa fantatsika momba ny tsaho niely tao amin'ny tambajotram-pifandraisana nandritra ny andro vitsivitsy izao, Apple dia nametraka iPad vaovao eo amin'ny tsena 2018 miaraka amin'ny Touch ID ary mifanaraka amin'ny Apple Pencil.
Apple dia te handany ny tahiry misy ny iPad Pro 9,7-inch ary noho izany dia nanamboatra iPad 9,7-inch vaovao miaraka amin'ny efijery iray izay mifanaraka amin'ny Apple Pencil ary koa mitondra Touch ID. Ity ny iPad mora vidy amin'ny taona 2018 izay raha jerentsika tsara dia fivoaran'ny iPad 9,7 izay amidy amin'izao fotoana izao amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny iPad Pro ankehitriny.
Ity iPad vaovao ity dia napetraka miaraka amin'ny efijery mifanaraka amin'ny Apple Pencil, puce A10 Fusion ary capacité anatiny an'ny ihany 32 GB izay mety 32GB na 128GB. Tsy misy kinova LTE. Voamarina fa misy kinova Wifi sy LTE. Miovaova ny vidiny arakaraka ny hoe ho an'ny ivom-pianarana na raha ho an'ny mpampiasa farany izany. Raha ny ivon-toeram-panabeazana dia ho azon'izy ireo amin'ny $ 299 izany raha ho an'ny mpampiasa hafa kosa dia handany $ 329 izy ireo. Miankina amin'ny 32GB na 128GB izany na WiFi na LTE. Izy ireo dia efa misy amin'ny loko telo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » Apple dia nanangana iPad 9,7 santimetatra vaovao ary mifanaraka amin'ny Apple Pencil